Kdenlive 20.12 bịarutere na ndozi maka ihe e kere eke nke mmetụta, ndepụta okwu na ndị ọzọ | Site na Linux
Ndị mmepe KDE weputara Kdenlive 20.12 nchịkọta akụkọ vidiyo, nke a kwadoro maka iji ọkachamara mee ihe, na-akwado ịrụ ọrụ na ndekọ vidiyo na DV, HDV na AVCHD formats, ma na-enye ọrụ niile edezi vidiyo, dịka ọmụmaatụ, ọ na-enye gị ohere ịgwakọta vidiyo, ụda na ihe oyiyi enweghị usoro site na iji usoro iheomume ma tinyekwa. ọtụtụ mmetụta.
Maka ndị na-amaghị Kdenlive, ị kwesịrị ịma nke ahụ nke a bụ ihe ịtụnanya oghe free video nchịkọta akụkọ maka GNU / Linux na FreeBSD ma dabere na ọrụ ndị ọzọ na-emepe emepe dị ka FFmpeg, usoro vidiyo MLT, na mmetụta frei0r.
1 Ozi kacha nke Kdenlive 20.12
2 Etu esi etinye Kdenlive 20.12 na Linux?
Ozi kacha nke Kdenlive 20.12
Ọhụrụ a version ọ pụta ìhè na agbakwunye ọrụ ntụgharị n'otu egwu ahụ maka imepụta ihe dị mfe mgbanwe maka splices. Kama ịhazigharị ihe ndị mebiri emebi na obere vidiyo, ihe ọhụrụ ahụ na - enye gị ohere ịtọ oge nke mgbanwe ahụ wee họrọ akara ngosi nke na - ekpebi elu nke mgbanwe ahụ mgbe ị gbanwere otu clip na ọzọ
Achọpụtara ngwaọrụ ọhụrụ iji tinye ma dezie ndepụta okwu, jikọtara ya na usoro iheomume ma tinye ya n'ọrụ n'ụdị egwu pụrụ iche na wijetị ọhụrụ, gbakwunyere Na-akwado ibubata ndepụta okwu na usoro SRT / ịnyịnya ibu na mbupụ na usoro SRT. Iji gbanwee ụdị na agba nke ederede, ị nwere ike iji mkpado HTML.
A na-achịkọta mmetụta niile n'ime usoro nhazi zuru ezu. Mmelite niile na ọnụọgụ ha emelitere. A na-egosipụta nsonaazụ ụda dị ugbu a dabere na ndakọrịta na arụmọrụ ha metụtara na sistemụ arụmọrụ dị ugbu a. Ebugala mmetụta na nsogbu na ụdị nsogbu dị iche iche na-echere iwepụ na nsonaazụ ndị ọzọ.
Ọ na-kwuru na semejuputa atumatu ohuru:
Ogidi ikwughachi iji jupụta ebe dị n'akụkụ vidiyo na usoro na-adịghị mma
VR 360 na 3D iji rụọ ọrụ stereoscopic na okpokolo agba atọ
Ihe nhazi vidiyo iji dozie nchapụta, iche, saturation na hue
Ugbo site na Mejupụta utịp nwere ikike snap ka keyframes.
Ike agbakwunyere iji nyegharịa mmetụta omenala aha ma tinye / dezie nkọwa ha.
Emeela ọrụ iji melite ojiji nke usoro iheomume ma bulie nzaghachi nke interface. Obere vidiyo na usoro iheomume na-agbanwezi agba site na mkpado emetụtara na ngalaba ọrụ ahụ.
Agbakwunyere ikike ịchịkwa nsonye nke ụda ụda site na aha egwu.
Agbakwunyere nkwado maka ihichapụ ọtụtụ egwu n'otu oge.
Na mkparịta ụka iji mepụta ebe oru ngo, nhọrọ ịdebe naanị mkpachị dị na usoro iheomume etinyere, yana nhọrọ iji họrọ usoro TAR ma ọ bụ ZIP.
Ejirila akụrụngwa akụrụngwa na qtwebengine wee gbanwee ya na akụ na-ebufe HTTPS na ndabara.
Etu esi etinye Kdenlive 20.12 na Linux?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Kdenlive 20.12 -abịa na ndozi maka ihe e kere eke nke mmetụta, ndepụta okwu na ndị ọzọ
SolarWinds mbanye anataghị ikike nwere ike ịbụ ihe ka njọ karịa na-atụ anya